Functions များဖြင့် category
ဘွိုင်လာ / ဖိအားသင်္ဘော / အပူ Exchange ထုတ်ယူခြင်းစက်များ
တံတား / ကားရပ်ရန်ဂိုဒေါင်ဖွဲ့စည်းပုံထုတ်ယူခြင်းစက်များ
ရေနံ / ဓာတုစက်မှုထုတ်ယူခြင်းစက်များ
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ / အဆောက်အအုံထုတ်ယူခြင်းစက်များ
tube Sheet များ
TPL108 Multi CNC လာကြတယ်စက်ကွယ်လွန်
TDJ စီးရီး CNC Angle လှည့် Band Sawing စက်
TSWZ1000 / TSWZ1250 CNC H ကို Beam ကို Drilling လိုင်း
TBL2020, TAPM2020 / TAPM2020A (Enhanced) CNC Angle Pun က ...
TPP103 / TPP104 CNC Hydraulic ပြားလာကြတယ် & မတ်လ ...
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်
TPHD2020 / TPHD2525 / TPHD3030 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling M က ...
TPPD103 / TPPD104 CNC Hydraulic ပြားလာကြတယ်, Drilli ...
TPPR103 / TPPR104 CNC Hydraulic ပြား Punchin Enhanced ...
TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & တစ်ဦး ...
TPP103 / TPP104 CNC Hydraulic ပြားလာကြတယ် & Ma ...
TAPM1010 CNC Angle လာကြတယ်, မှတ်သားနေပါသည် & မှေးညှပျ ...
မက်စ်။ အလုပ်အပိုင်းအစအရွယ်အစား: * 1600/2000 1600 * 1600mm
မက်စ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအချင်း: 40 မီလီမီတာ
ဤသည်မှာ? စက်မျက်စိကန်းလည်းအပေါက်မှတဆင့်တူးနိုင်အော်တိုအထူးတူးဖော်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ, နှိပ်, သံမဏိပန်းကန် milling, အနားကွပ်, ပြွန်စာရွက်များ, အဓိကအားဖြင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ, ဘွိုင်လာ, အပူ-Exchange နှင့်ဒါ on.?This စက်၏လယ်ပြင်၌တည်ရှိ၏ အပေါက်, လှေကားအပေါက်။
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏ကုန်ပစ္စည်းရေးစပ်သီကုံးမှု
12 သတ်မှတ်ပေးသည် Hydraulic Clamp နှင့်အတူ 1. Worktable 2. thickened နှင့် Enhanced ရွှေ့ပြောင်း Gantry
3. အမြင့်မြန်နှုန်းလေ့ကျင့်ခန်းဌာနမှူး CNC စနစ်နှင့်အတူ 4. လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့
5. Hydraulic ဘူတာ Chip Carriage နှင့်အတူ 6. အလိုအလျောက် Chip ပေါ်ကို
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏အဓိကဖျေါပွခကျြ
1. အမည်: ဒါဒါ Drilling, ထိခြင်း, Mills, Chamfering နှင့်။
2. သူ Work-piece အ: ဒီတော့အပေါ်သံမဏိဟင်းပွဲများ, အနားကွပ်, Tube Sheet များ, ဖိအားရေယာဉ်များနှင့်။
3. အမြင့်တိကျစွာ: ± 0.08mm ။
4. အမြင့်လည်ပတ်မြန်နှုန်း: ~ 3000 30 ရက်, r / မိ။
5. ဆယျ့နှစျမျောဟိုက်ဒရောလစ်ညှပ်, လေးစုံကိုအလုပ်-အပိုင်းပိုင်းတစ်ပြိုင်နက်ရောက်သည်နိုင်ပါသည်။
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ
ပုံစံ TPHD1616 TPHD2016
မက်စ်အလုပ်အပိုင်းအစအရွယ်အစား (W × L) ကို 1600X1600mm ပန်းကန်သို့မဟုတ်Φ1600mmအနားကွပ် 2000X1200mm ပန်းကန်သို့မဟုတ်Φ1200mmအနားကွပ်
အလုပ်အပိုင်းအစ၏အထူ 6-120mm 6-120mm
လေ့ကျင့်ခန်းယူနစ်အမျိုးအစား စားပွဲ, servo ထိန်းချုပ်မှုလျှော စားပွဲ, servo ထိန်းချုပ်မှုလျှော
လေ့ကျင့်ခန်းခေါင်းကိုအရေအတွက် တစ် တစ်
မက်စ်လေ့ကျင့်ခန်းအချင်း Φ40mm Φ40mm
ဗိုင်းလိပ်တံ၏အပေါက် Taper BT40 BT40
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း အသက် 30 ~ 3000r / မိနစ် (ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု) အသက် 30 ~ 3000r / မိနစ် (ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု)
ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်စတုတ် (Z ကိုဝင်ရိုး) 300mm 300mm
X ကိုဝင်ရိုး၏ Servo motor ကိုပါဝါ 2.0? kW 2.0? kW
Y ကဝင်ရိုး၏ Servo motor ကိုပါဝါ 1.5kW 1.5kW
Z ကိုဝင်ရိုး၏ Servo motor ကိုပါဝါ 2.0 kW 2.0 kW
chip ကိုသန့်စင်၏မော်တော်ပါဝါ 0.75 kW 075 kW
ညှပ်အမျိုးအစား 12 Hydraulic Clam နှင့် T-slot က 12 Hydraulic Clam နှင့် T-slot က
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်အမျိုးအစား SIMENS 808D SIMENS 808D
CNC ဝင်ရိုးအရေအတွက်33
ရာထူးတိ ± 0.08mm ± 0.08mm
CAD / CAM အော်တိုမျိုးဆက် function ကိုနှင့်အတူ
ချိုးအမှတ်မှတ်ဉာဏ်၏ function ကိုနှင့်အတူ (အလွယ်တကူပါဝါပိတ်ထားပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှု Restart)
ယေဘုယျအားအရွယ်အစား အကြောင်း 4500x3900x3200 အကြောင်း 4900x3900x3200mm
အလေးချိန် အကြောင်း 12000 အကြောင်း 14000
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်များ
လေဖြတ်ခြင်း၏အလုပ်အပိုင်းအစနှင့်အတူ 1. CNC ဆလိုက်လမ်းတူးဖော်ခြင်းဗိုင်းလိပ်တံ (Z ကိုဝင်ရိုး) Pre-set ကိုဖြစ်တယ်, အော်တို switch ကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာတဆင့်-အပေါက်မသာတူး, ဒါပေမယ့်လည်းစသည်တို့ကိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၏ဝိသေသ, ရိုးရှင်းသော-ဖွဲ့စည်းပုံ, တန်ဖိုးနည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူမျက်စိကန်း-ပေါက်နိုင်ပါတယ်
2. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်, အချိန်ကိုကယ်တင်ကိုလည်းလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ workpieces ကိုပြုပြင်တာတွေများအတွက် 12 ဟိုက်ဒရောလစ်ညှပ် & T က slot နှစ်ခုရှိပါတယ်။
3. ဒီစက်ကိုသုံး CNC ဝင်ရိုးရှိသည်: gantry ဦးတည်ချက် (X-ဝင်ရိုး) ရွေ့လျား; ဦးတည်ချက် (y ကိုဝင်ရိုး) ရွေ့လျားတူးဖော်ခြင်းခေါင်းကို; ဗိုင်းလိပ်တံနို့တိုက်ကျွေးရေးဦးတည်ချက် (z ဝင်ရိုး) ။ စက်မြင့်မားသောတိကျ servo motor ကိုအားဖြင့် drived ရာ linear guide နှင့်ဘောလုံးကိုဝက်အူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဝင်ရိုးတပ်ဆင်။
5. အဆိုပါစက် linear လမ်းညွှန်များနှင့်ဘောလုံးကို screw နှစ်ခုအဘို့အလိုအလျှောက်ချောဆီအရည်ကြည်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသော။
6. စက် Siemens 808D system ကိုချမှတ်မှာလည်းလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ, ပုံဆွဲခြင်းနှင့် workpiece အစီအစဉ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ကွန်ပျူတာနှင့်တပ်ဆင်။
7. ဘောလုံးကို screw နှစ်ခု, linear လမ်းပြသောအဓိကလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း, servo မော်တာ, အင်ဗာတာ, စတာတွေ, ရှိသမျှကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့စက်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
TPHD1616 / TPHD2016 အမြင့်မြန်နှုန်း CNC Drilling စက်၏ Workpieces
ယခင်: TSWZ700 CNC H ကို Beam ကို Drilling လိုင်း
နောက်တစ်ခု: ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်းမှတ်သားနေပါသည် TBL2020 / TAPM2020TAPM2020A / TAPM2020C Angle သံမဏိလာကြတယ်
အလိုအလျောက်သံမဏိ Drilling Machine ကိုပန်းကန်
Big သံမဏိ Drilling machine ပန်းကန်
ပြားသည် CNC Drilling စက်
ဟင်းပွဲများအတွက် CNC Drilling စက်
သံမဏိပြားများအတွက် CNC Drilling စက်
CNC Drilling Machine ကိုသံမဏိဟင်းပွဲသည်
CNC Drilling ပြား machine
CNC အမြင့်မြန်နှုန်း Drilling Machine ကိုပန်းကန်
CNC ပြား Drilling စက်
CNC သံမဏိ Drilling Machine ကိုပန်းကန်
CNC S က teel ပြား Drilling စက်များ
CNC Tube ပြား Drilling စက်
ပြားသည် Drilling စက်
Dri သံမဏိဟင်းပွဲများအတွက် lling စက်
အမြင့်မြန်နှုန်း CNC ပြား Drilling စက်
အကြီးစားပြား Drilling စက်
သတ္တုပြား CNC Drilling စက်
ရွှေ့ပြောင်းပြား Drilling စက်
Drilling Machine ကိုပန်းကန်
သံမဏိဟင်းပွဲများအတွက်လာကြတယ်ပြီးတော့ Drilling စက်
သံမဏိပြား CNC Drilling စက်
သံမဏိပြားဖြတ်တောက်ခြင်းပြီးတော့ Drilling စက်များ
သံမဏိ Drilling Machine ကိုပန်းကန်
သံမဏိပြားလာကြတယ် Drilling စက်
သံမဏိဟင်းပွဲများ Drilling စက်
TBL2020, TAPM2020 / TAPM2020A (Enhanced) CNC angle ...
TBS စီးရီး Band Sawing စက်
TBD စီးရီး Gantry ရွှေ့ပြောင်း CNC Drilling စက်
ဟင်းပွဲများအတွက် TPL104 CNC လာကြတယ်စက်
TPL108 Multi-ဘူတာရုံ Hydraulic CNC လာကြတယ်, Mac ...
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13793179476
E-mail ကို: info@sunrisecnc.com
E-mail ကို: melody@sunrisecnc.com
ဖက်စ်: +86 531 55611266